Ukukhuphuka kweTelegal phakathi kwezinhlelo zokusebenza ezilandiwe kakhulu emhlabeni
Impumelelo emenyezelwe: ukukhuphuka kweTelegal phakathi kwezinhlelo zokusebenza ezilandiwe kakhulu emhlabeni
Izindaba ezingaphezulu nezithokozisayo ezivela kuhlelo lokusebenza lwemiyalezo olusebenza kahle laphaya
Sonke siyakwazi lokho manje yocingo ingenye ye Uhlelo lokusebenza lwemiyalezo esheshayo iphephe futhi ivikeleke kakhulu ukulanda kuma-Smartphones ethu.
Yasungulwa ngo-2013 ukuphonsela inselelo inani eliphakeme ngokuphelele WhatsApp, insizakalo esekela impumelelo yayo kuyo ubuchwepheshe befu kanye nomcebo wezinto ezithuthukile. NgoJulayi 2020, izindaba nokuvuselelwa kukwenza kwanda ukushesha futhi kwaba lula ukusebenzisa.
Isibuyekezo sakamuva esivela yocingo ulethe ezinye izindaba nemininingwane ethokozisayo: edumile uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo ngokushesha wangena Izinhlelo zokusebenza ezi-10 eziphambili kakhulu emhlabeni.
Finyelela kusuka kumadivayisi amaningi eselula nawedeskithophu
Ukunakwa komsebenzisi kungenye yezintambo eziqondisayo eziqondise ukwakheka nokusetshenziswa kwayo yonke imisebenzi ye yocingo: kusukela ekungeneni kokufinyelela kusuka kumadivayisi amaningi kuze kufinyelele ekuqalisweni kwe Bot. Okufanayo ekuziphatheni kwabasebenzisi babantu, i Bot bayakwazi ukuxoxisana ngokuzenzakalela ku baxoxe ye-Telegraph, ukuvula amathuba amaningi okusebenzisa.
Ukuvuselelwa okusha okwethulwe ngoJulayi 2020 nakho kuthuthukisa imisebenzi eminingana. Okokuqala, ikuvumela ukuthi ubeke ividiyo kwisembozo isilayidi: ngamafuphi imuvi ezingangena esikhundleni se isithombe sendabuko. Lesi sici, phakathi kwezinye izinto, sikuvumela ukuthi usebenzise i-a Isihleli sevidiyo yangaphakathi ukwenza ngcono ikhwalithi, lungisa amaphutha amancane noma ufake Izitika ze-animated.
I-Chat-Bot kanye neRevolution of ejenti engxoxweni
Sekuyiminyaka ethile manje, iTelegramu yethule ithuba lokufaka Ama-ejenti angokoqobo ngaphakathi kwe baxoxe ukwazi ukuxhumana nokuzimela nabasebenzisi babantu futhi baphendule izicelo nemiyalo. Kusetshenziswa ikakhulukazi imisebenzi yezohwebo e izinkampani ukusebenzisa ezokuxhumana e ukugcina amakhasimendei ingxoxo-bot banezinto eziningi ezingabakhona ezizenza ithuluzi elibalulekile ezinkampanini nakwabasebenza kahle abadinga ukwengeza isikhathi nezinsizakusebenza.
Ingqalasizinda yesikhungo semininingwane eminingi nokubethela
Okunye okuhlukanisayo yocingo kungukuphepha okwedlulele okuqinisekisa kwizigidi zayo zabasebenzisi. Ubuchwepheshe obusebenzisayo bususelwa kwingqalasizinda enezikhungo eziningi zemininingwane nohlelo lwe i-cryptography okuqinisekisa ukudluliswa okuphephile kokuqukethwe, imininingwane kanye namafayela.
Ngamazwi amafushane, yocingo iqinisa izifiso ezinkulu zekusasa futhi ikhombisa ukunaka okuvuselelekile kumsebenzisi omvuza ngokumfaka umqhele App okulandwayo okuthandwa kakhulu kuwebhu.
Tags: uhlelo lokusebenza olusha ingxoxo-bot Izindaba telegram